Firefox 77, oo ah nooc leh isbeddelo badanaa loogu talagalay dadka wax horumariya | Laga soo bilaabo Linux
Toddobaadkii hore bilowga laanta cusub ee biraawsarka webka ee caanka ah Firefox, oo gaareysa nooca 77 iyo dhawr maalmood ka dib ayaa la saxay casriyeyn noocaan ah si loo xalliyo dhibaatooyinka qaar ee ku saabsan DNS-ka HTTP.
Xitaa iyada oo cusbooneysiintan yar la sii daayay, laanta cusub Browser Mozilla waa xusid mudan maxaa yeelay waxay badashay khariidad-hawleedkeedii si looga fogaado isbeddelada bixinta ee saameyn xun ku yeelan kara khibrada isticmaale ee daryeelka caafimaadka iyo bogagga dowladda.
Tan ayaa laga yaabaa inay tahay sababta Firefox 77 uusan ugu muuqan mid u qaab eg qaababkii hore.
Marka lagu daro talooyinka jeebka ee imanaya Boqortooyada Midowday (horeyba waxaa looga heli jiray Kanada, Jarmalka iyo Mareykanka laga bilaabo Abriil 2018), Noocaan cusub ee biraawsarka ayaa ugu horreyn ah nooc horumarineed.
Waana taas gudaha Dambixiye Firefox ayaa hadda sifiican u maarayn kara barnaamijyada waaweyn ee shabakadaha leh barkaddeeda oo dhan, dib-u-soo-noolaynta tooska ah iyo ku-tiirsanaanta.
Mozilla waxay ballanqaadaysaa hagaajinta waxqabadka taas oo yareyneysa isticmaalka xusuusta waqtiga. The Meelaha khariidaduhu waa inay sidoo kale arkaan waxqabadkooda oo hagaagaya (qaar ka mid ah ilaha khariidadaha khadka tooska ah ayaa 10 jeer ka dhakhso badan) iyo isku halaynta hagaajinta goobo badan. Khariidad ilo (Source source) ayaa ah feylal ay ka saareyso ka bixiyaha sameeyaha isku xirka koodhka socda iyo feylasha asalka asalka ah, taas oo u oggolaanaysa biraawsarka inuu dib u dhiso asalka asalka ah uuna ku muujiyo qashin qubka.
Tan iyo imaatinka Firefox Quantum bishii Nofeembar 2017, dadka isticmaala Firefox waa loo digay markii kordhintu rabto rukhsadaha qaarkood. Isticmaalayaasha mararka qaarkood way diidaan codsiyadan oggolaanshaha markay cusbooneysiinayaan kordhin, taas oo uga tagaysa qaybtii hore.
Firefox 77, horumariyayaashii kordhintu waxay samayn kartaa rukhsad badan oo la heli karo sida rukhsad ikhtiyaari ah, oo aan kicin codsi oggolaansho markaad rakibayso ama cusbooneysiineyso kordhin. Oggolaanshaha ikhtiyaariga ah ayaa sidoo kale la codsan karaa waqtiga
Firefox 77 sidoo kale waxay bixisaa menu cusub oo loogu talagalay shabakadda iyo khalad-siiyaha, ikhtiyaar feejignaan cusub oo isugu jira helitaanka / dejinta iyo dulmar guud oo ku saabsan xogta shabakadda.
Astaamaha cusub ee websaydhka waxaa ka mid ah String # replaceAll si loo beddelo dhammaan dhacdooyinka xarigga iyo codsiyada calaamadaha IndexedDB.
Isbeddel kale oo la soo bandhigo ayaa ku jira Bixiyaha Webka Waxay u isticmaashaa kombuyuutarkaaga PC ama kaarka sawirada halkii aad ka isticmaali lahayd processor-ka si aad u muujiso bog.
Teknolojiyadaan waxaa lagu dhex daray Firefox 67, laakiin waxaa heli kara oo kaliya tiro aad u yar oo isticmaaleyaal ah. Iyadoo la adeegsanayo Firefox 77, Web Render hadda waxaa lagu heli karaa asal ahaan laptops leh Windows 10 oo ku shaqeynaya Nvidia GPUs leh dhexdhexaad (<= 3440 × 1440) iyo shaashado waaweyn (> 3440 × 1440).
Firefox hadda waxay u fidisaa talooyinka jeebka kuwa isticmaala UK. Talooyinkaan waxaa horey loogu soo bandhigay Mareykanka, Jarmalka, iyo Canada muddo labo sano ah. Waxay soo muuqdaan markii aad furto tab cusub si aad ugu casuunto isticmaaleyaasha inay u akhriyaan maqaallada qaarkood ay muujiyeen Pocket-ka.
Browser.urlbar.oneOffSearches doorbididiisii ​​waa laga saaray. Si aad u qariso badhannada raadinta ee gaarka ah, iska hubi makiinadaha raadinta ee ku saabsan bogga: dookhyada # raadinta.
Wax ka beddello badan ayaa lagu sameeyay sii deynta.
Liiska dalabyada ku jira Firefox Options ayaa hadda u furan dadka isticmaala akhristaha elektaroonigga ah.
Taariikhda / waqtiga gelinta mar dambe looma calaamadin adeegsadayaasha qalabka marin u helka.
Waxay kala soo bixi karaan Firefox 77 bogga rasmiga ah ee biraawsarka isla markaana isticmaaleyaasha hadda jira ayaa horeyba u helay cusbooneysiinta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox 77, oo ah nuqul leh isbeddelo inta badan loogu talagalay horumariyeyaasha
Kuesa 3D 1.2, waa qalab lagu abuuro barnaamijyada 3D ee ku saleysan Qt 3D